Fursadaha Shaqada ee ITIL - Iskuulka ITS Tech
Inaad haysato shahaadada ITIL hoostaada gacmahaaga ayaa ah gargaar aad u weyn xagga xirfaddaada. Ma aha oo keliya kobcinta suurtagalnimada rajada mustaqbalka ee mustaqbalka, oo weliba dammaanad qaadaya qayb ka mid ah jimicsi kasta. Inaad noqoto hadiyad weyn oo ku saabsan resumeygaada, waxay ku siinaysaa faham ku wajahan macallinka soo socda ee ku saabsan soo dhaweynta qofka ee waxbarashada ee adeegga maamulka adeegga IT.
Hawlwadeen kasta oo ka mid ah adduunka oo dhan, oo leh dalab gooni ah, ayaa tagaya siinta taageerada ugu fiican ee ka faa'iidaystayaashooda. Isku-imaatinka maanta waa imtixaan, jimicsiga oo aad u sarreeya, waa imtixaan ay ka soo horjeedaan suuqyada, caanna waa caqabaddooda si ay ula dagaallamaan marxaladii tijaabada kasta. Dunidu waxay ku socotaa waxyaabaha laga filayo, ururada jimicsiga, waxay noqon karaan wax yar ama aad u qiimo badan dhammaadka wakhtiga ku habboon waqtiyada wanaagsan iyo kuwa xun ee suuqa. Si aad ula kulanto mid kasta oo ka mid ah dhibaatooyinka habka ugu caqli badan ee loola macaamilayo ganacsiga waa in ay xoogga saaraan guulaha dhexdhexaadinta, ka dib markaan waxtar lahayn khilaafka weyn ee kufsiga. Qaadashada xarkal ay ku qoran yihin kuwa yaryar ee Ganacsiga yaryar waxay eegaan awooda cusub ee ururrada waaweyn.
Ku qanacsan yihiin waxyaabo kala duwan:
Jaaliyado kala duwan maanta waxay ku tiirsan yihiin horumarinta. Ballaarinta dareenka ee ugu dambeeyay waa qaabka ITIL. Nidaamyada lagu qaato ka dib qaab dhismeedka ITIL wuxuu ka caawiyaa urur si loo soo bandhigo heerkulka ku xiran lacagta. Naqshad ITIL waxay ku dhammaatay inay noqoto mid wax soo saar leh, ka dibna kor u qaadaysa xiisaha loo qabo khabiirada ITIL. Tababarka ITIL wuxuu siinayaa ugu sarreeya macluumaadka ugu hooseeya ee ITSM musharaxiinta, taas oo ka dhigaysa kuwa ugu caansan raadinta kaddib marka la helo urur. ITIL waxay diyaarisay awood shaqo oo aan la bixin kaliya xirmo fiican oo la mid ah mushaharka laakiin isla markaa waxa loo shaqeeyaa qaybaha awooda ganacsiga. Waxyaabo badan oo ganacsi ah oo agagaarka ku wareegsan ayaa kor u kacay ITIL. Ururada sida Boeing, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Pfizer, Toyota, Walmart, NASA Disneyland iyo waxyaabo kale oo badan ayaa isku duubay ITIL. Ururada ka faa'iideysanaya ITIL aqoonsi ah oo awood u leh iyo karti-gelinta nidaamyada hadda iyo kuwa cusub ee hawl-galladooda iyo aasaaskooda.
Fursadaha Shaqo Badan:
Tababarka ITIL waa kumbuyuutarrada oo dhan sida qalab wax ku ool ah oo baabi'iya waddada mustaqbal ifaya. Khubarada ayaa maalgashaday Tababarka ITIL waxay kasbadaan wax ka badan kuwa lagu aqoonsanayo kala-duwanaansho kala duwan. Waxay siinaysaa cunto qayb sare oo ka mid ah dadka waaweyn ee hadda ku jira adeegga IT-ga. IDiiwaangelinta waxay hagaajinaysaa la-taliyayaal IT-da iyo khabiirada ITSM iyaga oo fursad u leh inay kobciyaan qaybtooda iyo weliba waxay muujinayaan faa'iidooyinka ganacsiyada kuwaa oo ku jira ururada IT-da iyo adeegyada IT.
Khabiiro ku lug leh Adeegyada IT-ga Maareynta, Maareynta Mashruuca, Hawlgallada Adeegyada iyo Naqshadda Adeegyada iyo farsamooyinka waxay ka faa'iideystaan ​​shahaadada ITIL. Waxay ka mid yihiin kuwaan Musharaxiinta haysta ITIL waxay isku dayi karaan inay gacan ka geystaan ​​sida baadhayaasha gudbinta IT-da, injineerada taageerada, taageerada farsamada iyo injineerada miiska caawinta. Tababarka ITIL wuxuu ku deeqayaa nin si dib loogu dhiso horumarinta ugu dambeeyay ee horumarinta cusub iyo wuxuu ku taageeraa isaga oo leh awoodda uu kula soo kulmi karo dhibaatooyinka beerta.
An Shahaadada ITIL waxay ka caawisaa nin inuu ku daro darajada dib-u-dejinta kadib markii uu kicin karo isbeddelkiisa shaqo abuurka ka sarreeya. Maadaama munaasabadaha xilliga kumbuyuutarrada ee maanta ay bilaabeen inay dhisaan qaabkeeda ITY fikradda, waxay ku jiraan baahi weyn Khabiirada ITIL oo haysta. Ma ahan dhalin-la'aan ah in la sheego waqti hore halkii ay ka dambeysay, laga soo xigtey codsiyada joogtada ah ee soo kobcinta, Shahaadada ITIL waxaa laga yaabaa inay dhammaadaan si cad oo khasab ah shakhsiyaadka raba in ay xirfadahooda ku sameeyaan ganacsiga IT.
Halkan ku saabsan blogka la xiriira Talaabo talaabo talaabo ah oo loogu talagalay shahaadada ITIL